Ny olan'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy hajaina - antso avo ho an'ny olana tsara (Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy 2021) - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Ny olan'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy hajaina - antso avo ho an'ny olana tsara (Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy 2021)
Ny areti-mifindra dia nampiharihary ny tsy fitoviana eo amin'ny rafitra sy ny rafitra ara-tsosialy sy ara-politika tsy mandeha miasa namboarina mba hanangonana harena tsy manam-petra vitsivitsy (lehilahy) mahery nefa namela olona an'arivony tapitrisa tao anaty fahantrana sy tsy fanantenana.
Ny hevitry ny fandrosoana dia nahatonga ny resaka ho lasa hevitra izay tsy tokony haingananay fotsiny: mazava izao fa raha te hanana fitoviana isika dia mila manova lalana.
Ity lahatsoratra ity, izay nosoratan'ny feminista afrikanina iray, dia manaitra antsika amin'ny fiaraha-mientan'ny fihetsiky ny vehivavy izay ahafahan'ny firafitry ny hery hanohitra ny fanovana lehibe sy rafitra takiana mba hahatratrarana ny fitovian'ny olombelona.
Fampidiran'ny editor: Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny alàlan'ny firesahana ny marina amin'ny hery
Ity lahatsoratra ity dia manangana lohahevitra maromaro noresahina tato amin'ny Andian-dahatsoratra Corona Connections, satria mamantatra tsy am-pisalasalana ireo teboka manan-danja amin'ny fanoherana ny fahamarinana momba ny lahy sy ny vavy izay nomen'ny herisetra vaovao. Ny teboka fanoherana tsirairay voalaza dia teboka fidirana amin'ny fanambarana ireo rafitra izay mitazona ny tsy fifandanjan-kery mampiavaka ny patriarka manerantany, mampiorina ny ambaratongam-pirazanan'ny lahy sy ny vavy ary ny saranga ara-toekarena izay misy fiatraikany lehibe amin'ny vehivavy miloko.
Ireo mpanabe fandriam-pahalemana dia afaka manazava ireo rafitra ireo amin'ny alàlan'ny famotopotorana misimisy momba ny tranga tsy fitoviana izay maneho ny tsy fahamarinana ifotony an'ny filaminan'ny fahefana eran-tany. Ny famotopotorana toy izany dia mety hameno amin'ny fandalinana ny hetsika politika feminista toy ny ezaka fandriam-pahalemana ataon'ny vehivavy afrikanina (eo amin'ireo vehivavy any amin'ny faritra hafa). Ity famotopotorana ity dia mety hiorina amin'ny piraofilin'ny vehivavy mpampandry tany tato ho ato izay nozarain'ny Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) tamin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo # 10DaysofFeministGiving. Ny fanadihadiana dia mety hamboarina amin'ny alàlan'ny angon-drakitra manankarena ao amin'ny GNWP's COVID-19 sy Databen'ny vehivavy, fandriam-pahalemana sy filaminana. Ho an'ny fanadihadiana nasionaly, ny politika mahomby amin'ny fifidianana ataon'ny vehivavy mainty amerikana dia hatao amin'ny famotorana.
Ny fanontaniana manototra dia: inona ireo rafitra tsy maintsy ovaina mba hahatratrarana ny fitovian'ny olombelona sy ny filaminana? Inona avy ireo safidy hafa azo atokisana indrindra? Inona ireo fanovana tena ilaina hafa azo eritreretina? Inona ny hetsika fandriam-pahalemana sy fitoviana ankehitriny manolotra fahafaha-manabeazana sy fandresen-dahatra ny olom-pirenena lehibe kokoa amin'ny filàna fanovana? Inona no mety ho fihetsika fohy mahomby sy paikady maharitra hanamboarana ny fitovian'ny olombelona marina sy maharitra?
Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, 2021
Ny olan'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy hajaina - Antso avo ho an'ny olana tsara
Nosoratan'i Mwanahamisi Singano sy Ben Phillips
(Navoaka avy amin'ny: Serivisy fanaovan-gazety. 3 martsa 2021)
NAIROBI / ROME, Mar 3 2021 (IPS) - Ny atahorana lehibe indrindra amin'ny fahombiazan'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy dia satria lasa hajaina izy io. Tonga ny fotoana hahatongavany ho andron'ny fahasahiranana indray.
Nanjary fomba fanao ho an'ny fanehoan-kevitra feno fanajana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ny mamerimberina hevitra telo momba ny resaka fananganana: voalohany, izao tontolo izao dia mandroso fa tsy ampy haingana; faharoa, andiana fampitahana eo amin'ny lehilahy ho vondrona tokana (ahazoana misimisy kokoa, misolo tena bebe kokoa, fidirana bebe kokoa) miaraka amin'ny vehivavy ho vondrona tokana (kely kokoa ny karama, kely kokoa ny solontenany, tsy tafiditra firy izy ireo); ary fahatelo, antso avo ho an'izay manana fahefana hametraka izany.
Ity Andron'ny Vehivavy ity dia mila mamotika ireo fomba amam-panao telo.
Tokony hitsahatra tsy hiteny isika fa mandroso hatrany amin'ny fitovian'ny miralenta izao tontolo izao. Ny krizy COVID-19 dia mahita ny fivadihan'ny zon'ny vehivavy.
Very asa haingana kokoa noho ny an'ny lehilahy ny asan'ny vehivavy; ny vehivavy dia miantsoroka ny ankamaroan'ny enta-mavesatra amin'ny fikarakarana tsy voaloa ho an'ny ankizy sy ny loholona; ny zazavavy dia nesorina tany an-tsekoly mihoatra ny zazalahy; Nipoaka ny herisetra an-trano, ary izany sarotra ho an'ny vehivavy ny mandositra.
Ary ny zava-misy raha vantany vao nisy ny krizy dia natosiky ny vehivavy lavitra hatrizay dia mampiseho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana ireo “fotoana mahafinaritra” - raha avela hitana elo ianao mandra-pahatongan'ny orana dia tsy tena manana ianao elo izany.
Tokony handeha ao ambadiky ny fampitahana isika eo amin'ny lehilahy sy izay ananan'ny vehivavy ary miresaka mazava momba ny tsy fitovian'ny firazanana, ny zom-pirenena ary ny kilasy izay mampifangaro ny traikefan'ny vehivavy.
Mba hanomezana ohatra iray, tamin'ny Desambra tamin'ny taon-dasa, ny tarehimarika amerikana dia naneho fatiantoka 140,000 asa. Avy eo dia naseho fa ny fahaverezan'ny asa rehetra dia vehivavy (ny lehilahy raha ny marina nahazo 16,000 asa, ary ny vehivavy very 156,000).
Ka ny tantara dia ny vehivavy amina vondrona iray resy tamina lehilahy maromaro. Fa avy eo dia naseho fa ireo fahaverezan'asa rehetra eo amin'ny vehivavy ireo dia azo isaina amin'ny alàlan'ny asa very ataon'ireo vehivavy miloko - vehivavy fotsy no nahazo asa net!
Araka ny nomarihin'i James Baldwin, tsy ny zavatra rehetra atrehana no azo ovaina, fa tsy misy azo ovaina raha tsy ny tarehiny.
Mba hanomezana ohatra iray hafa, isan-taona ny fivoriana isan-taona fanaon'ny Firenena Mikambana momba ny zon'ny vehivavy - ny Vaomiera misahana ny satan'ny vehivavy - dia mivory ao New York (15-26 martsa 2021), ary isan-taona dia misy solontena tsy dia mitovy loatra amin'ny vehivavy avy amin'ny Global North ary ny vehivavy misolo tena ny fikambanana tarihin'i Avaratra manerantany.
Vao mainka miharatsy izany satria any New York ny fivoriana, avo kokoa ny vesatry ny saran-dia amin'ny vehivavy avy amin'ny Global South, ary mila eken'ny governemanta amerikana izay afaka tonga, ary mandà na tsy mankato amin'ny visa ara-potoana izy io. ho an'ny vehivavy avy amin'ny Global South amin'ny isa avo kokoa noho ny vehivavy avy amin'ny Global North.
Ary ny visa ho an'ny vehivavy avy amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana izay tsy eken'ny governemanta amerikana matetika amin'ny fivorian'ny CSW sy New York hafa? Ireo vehivavy mahantra, vehivavy any ambanivohitra, vehivavy mipetraka an-tanàna, vehivavy mpifindra monina, vehivavy voan'ny aretina mitaiza, vehivavy nifanohitra tamin'ny lalàna, vehivavy mpanao firaisana ara-nofo - arakaraka ny fanilihana anao ara-tsosialy, dia mety hanilihana anao ara-bakiteny.
Tamin'ny CSW tamin'ny taon-dasa, nahatratra tampon'isa io ny krizy Covid, izay solontena ihany no monina ao New York avela handray anjara. Tamin'ny CSW tamin'ity taona ity, lasa virtoaly daholo izy io - lehibe amin'ny teôria, saingy mijanona amin'ny faritry ny fotoana ao New York fotsiny izy io, ka manery ireo mpandray anjara ao Azia handray anjara amin'ny alin'ny alina na fialan-tsinin'izy ireo.
Amin'ny herintaona dia mety hiverina hiverina ho velona izy io, ary toa mitaky pasipaoro vaksiny i Etazonia - izay tsy hanana izany ny olona 9 amin'ny 10 ao amin'ny Global South satria ny Etazonia sy ny firenena avaratra hafa dia manakana ny orinasa atsimo tsy hanao kinova mahazatra. ny vaksinina.
Averina indray, ny vehivavy avy amin'ny Global South dia hesorina tsy ho ao anatin'ny fivoriana momba ny fanilihana, tsy hanana fitoviana amin'ny fivoriana momba ny fomba hahazoana ny fitoviana.
Ho hitana ihany ny fitoviana ho an'ny vehivavy raha misy ny fanamby amin'ny endrika fanilikilihana mitazona ny vehivavy rehetra. Rehefa firenena afrikanina maro no nampiditra tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao amin'ny COVID-19, dia nanao fanakanana ho an'ny fiara mpamonjy voina tsy miankina izy ireo fa tsy nanome vola ho an'ireo izay mitondra fitateram-bahoaka tsy ara-potoana mankany amin'ny hopitaly - izay ny fomba fahamaroan'ny vehivavy miandry, izay tsy mahazaka fiara mpamonjy voina manokana. tongava any.
Toy izany koa, ny vehivavy iharan'ny herisetra an-tokantrano dia afaka mandao ny tranony amin'ny alina raha miaraka amin'ny polisy izy ireo, fa raha tsy manana renivohitra ara-tsosialy izy ireo mba hahafahan'ny polisy hiaraka amin'izy ireo (amin'ny teny hafa, na iza na iza tsy manan-katao), ary Niezaka ny handeha ho any amin'ny toeram-pialofana izy ireo, hitan'izy ireo fa nosakanan'ny mpampihatra lalàna noho izy ireo nivoaka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna - tokoa, vehivavy maro no nilaza tamin'i Femnet ny nandosiran'ny daroka nataon'ny vadiny mba hihaonana tamin'ny daroka nataon'ny polisy.
Tsy fanamby efa hitan'ny maso mialoha na nokasaina hataon'ny lehilahy sy ny vehivavy manankarena izay manjaka amin'ny fanaovana politika.
Tsy ampy ho an'ny lehilahy manam-pahefana ny ho resy lahatra hanokatra vavahady tery ao amin'ny trano mimanda ao amin'ny patriarka, izay ahafahan'ny vondrona kely vehivavy mifamatotra akaiky na manaja olona miditra ao aminy hanatevin-daharana azy ireo.
Ho an'ny vehivavy rehetra amin'ny fahasamihafan'izy ireo hahafahany miditra amin'ny asa mendrika, ny zon'olombelona, ​​ary ny fahefana mitovy, ny rindrina dia tsy maintsy harodana. Tsy misy omena ireo, fa ny fandresena ihany.
Araka ny nomarihin'i Audre Lorde, ny andraikitsika dia ny “manao tanjona iraisana amin'ireo olon-kafa fantatra fa ivelan'ny rafitra mba hamaritana sy hitadiavana tontolo iray ahafahantsika miroborobo rehetra. Ny fianarana mandray ny tsy fitovizantsika ary mampatanjaka azy ireo. Fa ny fitaovan'ny tompony tsy mba mandrava ny tranon'ny tompony mihitsy. ” Tsy mandeha ny fanajana. Mila fahasahiranana ny fitoviana.
Mwanahamisi Singano dia Lehiben'ny Fandaharam-pianarana ao amin'ny tambajotra afrikanina feminisn'ny feminisn'ny Fetsy; Ben Phillips * dia mpanoratra ny How to Miadia amin'ny tsy fitoviana.
#fanatsarana ny fandriam-pahalemana sy filaminana ho an'ny vehivavy
mpampihavana # vehivavy
Yemen: Ilay mpampianatra sekoly ady sivy taona
DePauw University mitady mpangataka toerana 1-taona amin'ny Peace Education
Resadresaka ho an'ny vehivavy Nobel miaraka amin'i Cora Weiss
Desambra 1, 2016 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Ny Nobel Women Initiative dia nanadihady an'i Cora Weiss ho ampahany amin'ny hetsika 16 Andro Fihetsiketsehana Manohitra ny Herisetra Miralenta. Iray amin'ireo nanombohana ny Fanentanana momba ny fandriam-pahalemana eran-tany, Cora dia mino fa ny fikatsahana fandriampahalemana dia holistic ary tsy maintsy harahina amin'ny alàlan'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Aprily 14, 2020 Fotoana famatsiam-bola 0
"Mamatotra amin'ny akanjo tokana ho an'ny lahatra:" Ethno-centric and World-Centric Perspectives on the Covid-19 Pandemie
Enga anie 1, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Dale Snauwaert dia nanamafy fa ny fanovana lalina amin'ny fomba fisainana sy fahatakarana dia takiana mba hiatrehana ny krizy amin'ny fomba mahomby sy amin'ny fomba mahomby. Ny fiovana avy amin'ny etno-centric mankany amin'ny fomba fijery mifototra amin'izao tontolo izao dia teboka fanombohana. [tohizo ny famakiana…]